चीन उच्च गुणवत्ता तनाव पॉलिमर सस्पेंशन इन्सुलेटर निर्माता र आपूर्तिकर्ता Histe
उच्च गुणवत्ता तनाव पॉलिमर सस्पेंशन इन्सुलेटर
सस्पेंशन इन्सुलेटरहरू सामान्यतया इन्सुलेट पार्ट्सबाट बनेका हुन्छन् (जस्तै पोर्सिलेन पार्ट्स, गिलास पार्ट्स) र मेटल एक्सेसरीज (जस्तै इस्पात खुट्टा, फलामको क्याप्स, फ्ल्याजेस, इत्यादि) चिपकाइएको वा मेकानिकल क्ल्याम्पेड। इन्सुलेटरहरू व्यापक रूपमा पावर सिस्टममा प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू सामान्यतया बाह्य इन्सुलेशन र वायुमण्डलीय परिस्थिति अन्तर्गत काम गर्दछन्। ओभरहेड ट्रान्समिशन लाइनहरू, पावर प्लान्टहरू र सबस्टेशनहरू, र विभिन्न विद्युतीय उपकरणहरूका बाह्य प्रत्यक्ष कन्डक्टरहरू इन्सुलेटरहरूद्वारा समर्थित हुनेछन् र पृथ्वीबाट (वा जमीनी वस्तुहरू) वा अन्य कन्डक्टरहरूले सम्भावित क्षमतासहित इन्सुलेटरलाई समर्थन गर्नेछन्। मतभेद
उत्पाद सुविधाहरू र फाइदाहरू
१. सिलिकॉन रबर शेड बूस्टर सहज र कम्प्याक्ट छ
२. उत्तम हाइड्रोफोबिक प्रदर्शन, बुढ्यौलीको लागि राम्रो प्रतिरोध, ट्र्याकिंग र एरोसन।
H.उच्च-शक्ति एसिड प्रतिरोधी एफआरपी रडले कम्पोजिट इन्सुलेटरको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्दछ।
The.रेसिंग कोरोना रिंगले राम्रोसँग इन्सुलेटरको कुनामा सँगै बिजुली क्षेत्रको वितरण गर्दछ कोरोना घटनालाई रोक्न र इन्सुलेटरलाई फ्ल्यासओभरको अवस्थामा फिटिंगमा ठूलो फिटबाट सुरक्षित गर्दछ।
The. अन्त फिटिंग र FRP रड आयातित अन्त फिटिंग crimping उपकरण संग जोडिएको छ, उत्पादन को यांत्रिक प्रदर्शन सुनिश्चित गर्दछ।
The.अद्वितीय अन्त फिटिंग सील संरचना संरचना उत्पादन सील विश्वसनीयता सुधार गर्दछ।
The. कडाई निरीक्षण उपायहरु हरेक उत्पाद को सही गुणवत्ता सुनिश्चित।
W. हामी ग्राहकहरु को रेखाचित्र र विस्तृत आवश्यकता अनुसार डिजाइन र उत्पादन गर्न सक्छौं।
उत्पाद नाम उत्पादन
समग्र क्रस-इम इन्सुलेटर FSW-35/100 35 100 650 450 1015 230 95
अघिल्लो: उच्च सुरक्षा सिलिकॉन रबर पोस्ट कम्पोजिट इन्सुलेटर
अर्को: उच्च गुणवत्ता उच्च भोल्टेज पृथक स्विच
(१) गुणस्तर आश्वासन
हामीसँग कच्चा मालबाट तैयार उत्पादहरूमा कडाईका साथ गुणवत्ता नियन्त्रण प्रक्रिया छ। उन्नत परीक्षण प्रयोगशाला निश्चित उत्पादहरूको गुणवत्ता बनाउन र हाम्रो रचनात्मक क्षमता सुधार गर्न। गुणवत्ता र सुरक्षा हाम्रो उत्पादहरु को आत्मा हो।
(२) उत्कृष्ट सेवाहरू
धेरै वर्षको निर्माण अनुभव र धनी निर्यात व्यापारले सबै ग्राहकहरूको लागि राम्रोसँग प्रशिक्षित बिक्री सेवा टीम स्थापना गर्न हामीलाई मद्दत गर्दछ।
()) छिटो डेलिभरी
तत्काल अग्रणी समयलाई सन्तुष्ट पार्न कडा उत्पादन क्षमता। हामीले भुक्तानी प्राप्त गरिसकेपछि यो लगभग १-2-२ days कार्य दिनहरू हो। यो बिभिन्न उत्पादन र मात्रा अनुसार फरक हुन्छ।
()) OEM ODM र MOQ
द्रुत नयाँ उत्पादनको विकासको लागि कडा आर एंड डी टीम, हामी OEM, ODM लाई स्वागत गर्दछौं र अनुरोध अर्डरलाई अनुकूलन गर्दछौं। चाहे हाम्रो सूचीबाट हालको उत्पादन छनौट गर्नुहोस् वा तपाईंको आवेदनको लागि ईन्जिनियरिंग सहायता खोज्नुहोस्। तपाईं आफ्नो सोर्सिंग आवश्यकताहरूको बारेमा हामीलाई बताउन सक्नुहुन्छ।
सामान्यतया हाम्रो MOQ १०० pcs प्रति मोडल हो। हामी तपाईको आवश्यकता अनुसार OEM र ODM पनि उत्पादन गर्छौं। हामी विश्वव्यापी एजेन्ट विकास गर्दैछौं।
उच्च सुरक्षा सिलिकॉन रबर पोस्ट कम्पोजिट ...
उच्च भोल्टेज इलेक्ट्रिक समग्र तनाव पिन Insu ...
थोक चिनियाँ उत्पादन समग्र क्रस आर्म I ...